झण्डै सात दशकसम्म देश र प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेस आज इतिहासको संगीन मोडमा आइपुगेको छ । एक वर्ष अघि सम्पन्न १३ औ महाधिवेशन पछि पार्टीलाई पुनःजीवन दिने संकल्प र प्रतिबद्धता सभापतिज्यू र हामी सबैले गरेको तथ्य पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु ।
यो एक बर्षको वीचमा सकारात्मक र आशा लाग्दा कामहरू पनी भएका छन् । लामो समयदेखि हुन नसकेको भातृ संगठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । भातृसंस्थाहरुको अधिवेशन भएकोमा जिल्ला-जिल्लामा खुशी देखिएको छ ।
यो वीचमा म धेरै जिल्लामा पुगेको छु । तर, पार्टीका पदाधिकारी चयन हुन नसक्नु, पार्टीका केन्द्रीय बिभाग बन्न नसक्नू, पार्टीको प्रादेशिक संरचना बन्न नसक्नू र पार्टीलाई गतिशिल एवं चलायमान बनाउन नसक्नु नेपाली काग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीकै लागि दूर्भाग्य हो ।
पार्टी संस्थागत र सहज ढंगले चल्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ । केन्द्रमा बसेर नेताहरूले गुटको खेती नगरिदिने हो भने हामी विभाजित हुँदैनौं भन्ने कार्यकर्ताको भावना रहेको छ । गुटको खेतीले गर्दा आम कार्यकर्ताले काँग्रेस भएर बाँच्न पाइरहेका छैनन् । कार्यकर्ताको मनोबल खस्केको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि देशवासीमा एउटा कौतुहलता र जिज्ञासा बाँकी छ अब कांग्रेसले के गर्छ ?
दूर-दराजका आम जनता र कार्यकर्ताले पार्टी सरकारमा भएको अनूभूति गर्न सकेका छैनन् । जनतामा बितृष्णा र कार्यकर्ताहरूमा निरासा छाएको छ । चुनावमा हामीले जनतासामु लिएर गएको घोषणापत्र र महाधिवेशनमा कार्यकर्तासामु प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कति पूरा भयो ? त्यसको समीक्षा गरिनुपर्छ कि पर्दैन ?
केवल औपचारिकताका लागि मात्रै यी बिषयहरू जनता र कार्यकर्ताहरू सामु प्रस्तुत गरिएको हो भने त्यो पार्टी र मूलूक दुबैका निम्ति दूर्भाग्य हो । हामी कसका लागि र केका लागि राजनीति गर्दैछौं ? केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै कांग्रेसले राजनीति गरेको हो भने मुलुकले कहिल्यै निकास पाउन सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेस आफ्नो बचनमा प्रतिवद्ध पार्टी हो भन्ने कुरालाई हामीले व्यवहारमा प्रमाणित गर्न जरुरी देखिएको छ । सर्वप्रथम हामीले अहिलेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । तत्कालिन माओवादीको शसस्त्र विद्रोहबाट पिडित पार्टीका कार्यकर्ताहरुको घाउमा मल्हम लगाउन अझै सकिएको छैन् । भुकम्प र विभिन्न समयमा आएका बाढीपहिरोबाट आहत बनेका जनताको राहत र पुर्नस्थापनाका काम अझै अलपत्र छन् । यसप्रति पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजदूत नियुक्तिको सिफारिस र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको बिषयले आम कांग्रेसजनलाई लज्जित बनाएको छ । म्यानपावर सञ्चालकलाई उसैले जनशक्ति पठाउने मूलुकमा राजदूत बनाएर पठाउँदा त्यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कूरा किन सोचिएन ? स्वार्थ बाझिने यस्ता बिषयमा पार्टी पटक्कै संवेदनशील बनेको देखिएन ।
प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको बिषयमा पार्टी सभापति र गृहमन्त्रीवीचको असहमति जसरी मिडियामा आयो, यदि सत्य हो भने त्यो पार्टीको निम्ति राम्रो होइन । प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारको हो । सरकारले नियमावलीको अधीनमा रहेर गर्नुपथ्र्यो । अर्कोतर्फ जुन न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) दियो, सोही न्यायाधीश नै अन्तिम फैसलामा बस्नु न्यायिक मर्म र अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत हो ।
यसमा सर्वोच्च अदालतले गल्ती गरेकै हो र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त एवं लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खेलमा न्यायालय लागेको छ भन्ने कुरा अब प्रष्ट भएको छ । यति भन्दाभन्दै सर्वोच्चको फैसलालाई नै आधार मानेर नै अब सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।
अर्को गम्भीर बिषय- नेपाली कांग्रेस केन्द्रको निर्णय अनुसार म (डा.शेखर कोइराला) र केन्द्रीय सदस्य, गोविन्द भट्टराईले केन्द्रीय प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्दै ०७२ साउन ९ गते जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाको तेस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन तथा बन्द सत्र सम्पन्न गरी अधिवेशनका उम्मेद्वारहरु र अष्ट्रेलियास्थित प्रजातन्त्रबादी साथीहरुसँगको ब्यापक छलफल पश्चात सहमतिका आधारमा कार्यसमिति गठन गरेको सर्वविदितै छ ।
संबिधानको समीक्षा, कार्यान्वयनका चुनौती तथा कांग्रेसको भूमिकाः
नेपाली कांग्रेसले ००७ सालदेखि उठाउँदै आएको संविधान सभाबाट संबिधान जारी गर्ने बिषयले सार्थकता पाएको छ । पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेर मुलुकलाई अग्रगामी बाटोतर्फ प्रवेश गराएको छ । संविधान सभाबाट जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बन्न दिनुहुँदैन ।
संविधान गतिशील एवं परिवर्तनशील हुन्छ र यसलाई समयसापेक्ष ढंगले आवश्यक परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ । यो संबिधानले सबै वर्ग, लिंग तथा समुदायको समानुपातिक-समावेशीको ग्यारेन्टी गरेको छ । छलफल र प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधनको विषयलाई थाती राखेर निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा जान सकिँदैन ।
संविधान संशोधन प्रक्रियाका सवालमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । कहिले संसदमा यस विषयमा छलफल नै गर्न दिन्नौं भन्ने कहिले एकदिनका लागि मात्रै छलफल दिन्छौं भन्ने यो एमालेको अत्यन्तै लज्जास्पद दोहोरो चरित्र हो । कतै एमालेले यो संविधान फेल गराएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान खोजेको त हैन ? अथवा कहीँ कतै एमाले परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न नदिएर लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेलमा त लागेको हैन ? भन्ने आशंका देखिन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले संबिधान कार्यान्वयनका बिषयमा नेतृत्व लिनुपर्छ र सबै शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि समसामयिक विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिनसक्ने र सही दिशानिर्देश गर्ने क्षमता पार्टीले बढाउनु पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रियता मजवुत बनाउने ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्पूर्ण रुपमा ग्यारेण्टी गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक संस्था र संरचनालाई मजबुत बनाउने कुरामा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सद्भावयुक्त सहयोग जुटाउनु हाम्रो दायित्व हो ।
त्यस्तै नेपालको पूर्वाधार विकास, उत्पादनको क्षेत्र र गरिवी निवारणको महाअभियानमा सहयोग लिन सक्ने क्षमता नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पुर्नपुष्टि गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
२. हिमाल-पहाडमा एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद र उग्रराष्ट्रवादले जरा गाड्न सुरू गरिसकेको छ । एमाले अतिवादी पार्टी हो र अहिलेको समस्याको जड नै एमाले हो भनेर भन्न हामी सकिरहेका छैनौं र एमालेका करतुतहरूलाई जनतासामु लगेर भण्डाफोर गर्न सकिरहेका छैनौं ।
एमालेकै दम्भ र हठले देश द्वन्द्वको नजिक पूगेको र अहिलेको जटिल परिस्थिती पैदा भएको हो भन्ने यथार्थता हामीले जनतालाई नबुझाएसम्म कांग्रेसको अवस्था सुन्नेवाला छैन । न्यायालयदेखि मिडियासम्म एमालेको छायाँ परिसकेको छ । राज्यका प्राय सबै निकाय एमालेकरण भैसकेको छ ।